FANODIKODINAM-BOLAM-PANJAKANA : Tsy ho afa-bela i Solonandrasana Mahafaly Olivier
Notanterahina, omaly, teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo ny fifamindram-pahefana teo amin’ny praiminisitra vaovao Ntsay Christian sy ny praiminisitra teo aloha, Solonandrasana Mahafaly Olivier. 7 juin 2018
Ity farany izay ohatry ny mbola nanome toky fa mbola hiverina amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena tsy ho ela. Mazava araka izany fa tsy mihevitra ny mety hisian’ny arakaraka ingahy Solonandrasana Mahafaly Olivier noho ny zavatra maloto maro nataony nandritra ny 2 taona naha praiminisitra sy taona maro naha minisitry ny Atitany azy. Iaraha-mahafantatra, ohatra, fa voasaringotra amin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana nataon-dRazaimamonjy Claudine ingahy Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Na tiany na tsy tiany tsy ho afa-bela amin’io raharaha io ity farany. Efa nametraka fitoriana momba azy any amin’ny Fitsarana mikasika izany rahateo ireo depioten’ny fiovana ka andrasana ny mety ho tohiny.
Maro ny zavatra maloto nataon’ingahy Solonandrasana Mahafaly Olivier sy ny fanamparam-pahefana nataony nandritra ny fotoana naha praiministra azy ary vola tsy toko tsy forohana no nangoniny teo. Isan’izany ireny vola amina miliara nisy nangalatra tao an-tranony ireny.
Nandà mafy ingahy praiministra teo aloha nefa niaraha-nahafantatra fa efa voasambotra ary naiditra am-ponja ilay olona nangalatra izany volabe izany sy ireo namany. Matoa mandà, tsy mazava ny fiavian’iny volabe iny. Tokony hanadihady fatratra momba izany ny Bianco.
Mbola lava ny lisitra mikasika ny raharaha maloto nataon’ingahy Solonandrasana Mahafaly Olivier nandritra ny fotoana naha praiministra azy ary hotaterinay eto amin’ny fotoana manaraka. Fotoanan’ny fiovana izao ary lany daty ny tsy matimanota.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (330) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (169) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (160) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (114) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (84) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (82) 24 novembre 2020